Isi Ojiji: Black Mouth Cur - Reeddịrị
Black Mouth Cur na-enweghị atụ bụ ezigbo mgbakwunye na ezinụlọ ọ bụla. Nkịta ndị a bụ na-eguzosi ike n'ihe, na-echebe, na-egwuri egwu, ma nwee uche .
Ewezuga mmụọ ha dị mma, Black Mouth Curs (BMCs) bụ ndị amaara maka uwe na-acha odo odo, aja aja, ma ọ bụ ọbara ọbara, anya wuru, na ọgụgụ isi.
Ka m kọọrọ gị gbasara ụdị a dị egwu ka ị nwee ike ikpebi ma ọ bụ nkịta kwesịrị ekwesị maka gị.
Nkọwa dị mkpirikpi nke Black Mouth Cur
Gini ka Black Mouth Cur na-adi?
Kedu ka ọnọdụ iwe nke Black Mouth Cur?
Ọchịcha Black Black dị mfe ịzụ?
Kedu ụdị mmega ahụ Ọdụm ndị a chọrọ?
Ihe na-eri nri Black Mors Curs
Ndi BMC choro otutu edozi?
Enwere nsogbu ahụike nwere ike na Black Mouth Cur?
Cheta Onye Ochie Ochie?
Ego ole bụ ụmụ nkịta Black Mouth Cur?
Njikere ibu onye nwe ihe na-ahu n'anya na-eguzosi ike n'ihe Black mouth cur?
A na-ejikarị okwu ahụ bụ 'cur' mee ihe maka mutt ma ọ bụ nkịta agwakọtara agwakọta. Ebu ụzọ jiri okwu ahụ eme ihe maka nkịta na-anya ehi bekee
Na United States, a ‘cur’ bu a dị ọcha nkịta na-agba osisi. Nkọbido sitere na Ndịda Ọwụwa Anyanwụ US, ebe a zụrụ ha ịrụ ọrụ na ugbo na oke ọhịa dị ka ndị na-azụ ehi na ndị na-achụ nta anụ ọhịa.
A na-akpọkarị Black Mouth Cur dị ka a ịchụ nta . A marawo ahịhịa ndị a siri ike, siri ike n'akụkọ ihe mere eme dị ka ndị na-azụ ehi nke ọma, ndị na-achụ nta hog, na nkịta na-elekọta ezinụlọ.
N'oge a, enwere ike ịchọta BMC gburugburu obodo niile. Otú ọ dị, n’ebe ụfọdụ, e nwere ike nwee aha dị iche iche.
Nke a bụ ndepụta nke nkịta nke ezinụlọ Black Mouth Cur nke nkịta:
Ntọala Black Mouth Cur (nke Texas)
Ladner Yellow Blackmouth Cur (site na Mississippi)
Oke Oji Black Florida
Southern Black Mouth Cur (si Alabama)
Ọnụ Blackgba ojii Black vs Mountain Curs
The Mountain Cur bụ ihe ọzọ na-arụ ọrụ nkịta nke ahụ na-ehie ụzọ mgbe mgbe maka Black Mouth Cur. Otu ihe putara ihe di n'etiti udiri anumanu abuo bu na Ugwu bu obere-ọkpụkpụ karịa BMC .
Ihe ozo di iche bu ugwu ndi an’akpo Uwe ogologo . N'ihe banyere mmetụta, Black Mouth Curs maara na ọ ga-aka ike karịa ma e jiri ya tụnyere Mountain Cur.
Imirikiti BMCs bụ ọkara na nnukwu na nha. Ndị nkịta a nwere ahụ ike, nke na-enyere ha aka ịrụ ọrụ nke ọma dị ka nkịta ịchụ nta.
Oke Black Mouth Cur nwere ike ịdị ebe ọ bụla 16 ruo 25 sentimita asatọ (40 ruo 63 cm) n'ogo ma nwee nkezi nke 40 ka 95 n'arọ (18 ka 43 n'arọ).
Nkịta a nwetara aha ya site na njirimara ya dị iche iche: a mgbanaka nke ink gbara ya gburugburu nke yiri square. Ihe nzacha ahụ na-agbatị n'ime ọnụ.
Physicaldị njirimara ndị ọzọ nke ụdị a nwere ike ịdị iche n'etiti nkịta. Fọdụ nwere ntị a kapịrị ọnụ, ebe ndị ọzọ BMC nwere ntị na-adịghị agbanwe agbanwe. Ọtụtụ Ọnụ Blackkọ ọnụ Black nwekwara ụkwụ webbed .
Ọtụtụ n'ime ndị a dị ọcha nwere Uwe mkpuchi nke obere ntutu , nke nwere ike ịdị mma ma ọ bụ sie ike na ederede. Uwe ojii Black Mouth Cur na-abịa na agba dị iche iche, dabere na ya usoro ọbara : nwa, aja aja, ma ọ bụ ọbụna nchikota nke acha ọbara ọbara, odo, na fawn.
A maara canines ndị a pụrụ ịdabere na ha nrubeisi na nkwụsi ike , ma àgwà dị mkpa mgbe ị na-achụ nta egwuregwu.
Àgwà ndị a bụkwa ihe na-eme Black Mouth Cur ezigbo nkịta ezinụlọ.
Ha nwere ike ịbụ ịhụnanya na ntụkwasị obi ndị enyi ma na-eguzosi ike n'ihe nye nkwado mmadụ ha. Ha bụ Na-elekọta mmadụ ndị e kere eke, ha agaghịkwa ahụ n'anya karịa iji ụbọchị ahụ n'akụkụ akụkụ nke onye nwe ha.
Ukwuu siri ike ma na-egwuri egwu , ha bụ ezigbo anụ ụlọ maka ezinụlọ nwere ụmụaka. Cheedị ka ụmụaka gị na nkịta gị na-agba ọsọ n'èzí ụbọchị niile. A BMC na-adị njikere maka ụdị ọchị ahụ.
Ọ bụrụ na ị lụbeghị di ma ọ bụ nwunye, ị ga-ahụkwa na ị na-anụ ụtọ ụdị mkpakọrịta a, karịchaa ma ọ bụrụ na ị nwere onye nwere ndụ ndụ .
Legodị ike ụmụ ntakịrị Black Mouth Cur:
Ndi Ogha Black Black na-eme ihe ike?
Ime ihe ike megide ụmụ mmadụ bụ ihe atụ nke ụdị a. Agbanyeghị, nkịta ndị a nwere ike mepee ihe ọgụ na-enweghị ọzụzụ kwesịrị ekwesị na mmekọrịta mmadụ na ibe ya .
Black Ọnụ ọnụ bụ nchebe dị ukwuu nke ezinụlọ ha. BMC ga - enwe njikọ siri ike na ngwugwu mmadụ, ọ ga - echekwa gị n'atụghị egwu pụọ na egwu.
N'ihi ọdịdị ha dị ka nkịta na-achụ nta na ndị dinta, nkịta ndị a nwekwara ike ịbụ n'ókèala . Ha nwere ike ọ gaghị na-emekọ ihe nke ọma tinyere anụmanụ ndị ọzọ nọ n'ụlọ ahụ, nyere anụ oriri ha.
Ọ bụrụ na ị na-eme atụmatụ itinye Black Mouth Cur na ezinụlọ gị, gbaa mbọ wepụta oge iji webata ya na furbabies gị ndị ọzọ.
Ezigbo mmekọrịta mmadụ na ibe ya ga-ahụ na mmadụ niile na-ebikọ n'udo.
Ọnụ Ọchị Black dị ka nkịta na-arụ ọrụ
Dị ka anyị kwurula, Black Mouth Curs bụ ndị kachasị mma n'ịrụ ọrụ dị ka ndị na-achụ nta na ndị na-azụ anụ .
Ha na-adị nwayọọ karịa nkịta ndị ọzọ, nke mere ndị dinta ji ahọrọ ụdị a dị ka ndị enyi canine.
Nkọcha ndị a nwere imi emere maka trailing (ịchọta isi na ikuku) ma ọ bụ nsuso (na-eso isi na ala). Ọhụhụ ha pụtara ọhụụ na ịnụ ntị dị nkọ na-eme ka ha jide n'aka na ha nwere ike ịhụ ngwa ngwa ngwa ngwa dịka raccoons, squirrel, deer, na hogs ọhịa.
Ewezuga arụmọrụ ha n'ịchụ nta anụ, Curs ndị a bụkwa ndị a pụrụ ịtụkwasị obi dịka nkwado ụmụ anụmanụ . Site na mmụọ dị jụụ na ahụ siri ike, ha nwere ike inye nkasi obi nkịtị n'oge ọgụ ụjọ.
Black Ọnụ ọnụ bụ incredibly ọgụgụ isi nkịta, nke ga-eme ka ha zụọ ha ikuku. Ha na-enwe ike ịmụ ngwa ngwa okwu ọnụ na nkọwapụta na-enweghị isi sitere n'aka ndị nwe ha.
Dị ka ọ dị n’ọtụtụ nkịta, ọ kacha mma ị malite ịzụ Black Mouth Cur dị ka nwa nkita . Nkịta ndị a na-aza ihe kacha mma nkwalite dị mma .
Otu ụzọ iji hụ na ọ nakweere ezi agwa bụ inye ya ọtụtụ ihe otuto na ọgwụgwọ Mgbe ọ na-agbaso iwu gị.
Mmekọrịta kwesịrị ekwesị dịkwa mkpa maka BMC. Site n’ichetara ha mmadụ na anụmanụ dịgasị iche iche dị ka nwa nkita, ha na-amata omume ndị a na-anabata na nke na-abụghị.
Site na udiri udiri a nke ndi ozo na ichikota, o na-ak uziri ha ikuziri ha ihe di iche n’etiti ezigbo egwu na egwu. Wayzọ a, ị nwere ike zere ọnọdụ nrụgide na nkịta gị.
Anyị anaghị egwu egwu mgbe anyị kwuru na Black Mouth Cur nwere ume dị elu. ’Ll ga-etinye oge dị ukwuu n'inye nkịta gị mmega ahụ zuru oke.
Nke a Cur chọrọ ọ dịkarịa ala otu awa nke mgbatị ahụ siri ike kwa ụbọchị. Ọ bụ ezigbo enyi maka ịgagharị, ịgba ọsọ, na hikes, dị ka ahụ siri ike adịghị ada mbà ngwa ngwa.
Egwuregwu canine dị ka frisbee, ọzụzụ agility na arọ Anam Udeme bụkwa ezigbo nhọrọ maka ọkụ site na ike nke nkịta a. (Maka nchekwa, jide n'aka na nkịta gị dịkarịa ala afọ 2 tupu ọ sonye n'egwuregwu.)
BMC choro ibi ndu dika ha gha etinye ha ume siri ike ka ojiji. Ha na-eme nke ọma kacha mma n'ụlọ nwere nnukwu n'azụ ụlọ ebe ha ga-agbagharị.
O nwere ike ịbụ ntakịrị ihe siri ike ma ọ bụrụ na ị bi n'ụlọ, mana ị nwere ike iburu Cur gị mgbe niile gaa ogige nkịta kacha nso ka ọ na-enweta oge ọ bụla nke oge egwuregwu.
BMC a na-eleghara anya nwere ike ibibi. I ta ata ma na ogbugbu mmadụ pụrụ ịghọ ihe nsogbu nke na-akpata ma dai nrụgide ma ọ bụ nkụda mmụọ .
Enwere ike izere nsogbu omume ndị a ma ọ bụrụ na canine a dị ike na-enweta ume na anụ ahụ zuru oke.
Ewezuga ihe omume dịka ịgba ọsọ, ịchụ nta, ịzụ anụ, na igwu mmiri, Black Mouth Curs na-enwe egwuregwu ndị chọrọ ka ha chee echiche. Achụ nta akụ na ihe egwuregwu ụmụaka bụ ụzọ dị mma iji mee ka uche nkịta gị dị nkọ.
Site na nkịta a nke muscular wuru na ike dị elu, nri Black Mouth Cur kwesịrị inwe a nnukwu protein na abụba . Carbohydrates ga-abụkwa isi iyi nke ike.
Usoro nri nkịta maka nkịta buru ibu bụ ezigbo nhọrọ maka ụdị a. Nye BMC gị nri Iko 3 nke akara ubochi akọrọ kwa ụbọchị . Jide n'aka na ịkekọrịta ụdị nri a n'ime nri 3 ruo 4 iji belata ohere nke bloat.
Na usoro ejiji, Black Mouth Cur dị mma obere-ndozi jiri ya tụnyere ụdị ndị ọzọ.
Ọ dị mfe ilekọta obere uwe a. Ghichaa uwe BMC gị otu ugboro n'izu iji mee ka ọ dị mma ma dị ọcha.
Ọ naghị awụpụ ọtụtụ ajị anụ, mana ọ nwere ike ịwụfu karịa ka oge na-agbanwe.
Ọtụtụ ugboro brushing sessions Enwere ike ịdị mkpa n'oge a iji wepụ ntutu nwụrụ anwụ na uwe ya.
Saa ahụ nkịta gị naanị na ntọala ‘dị ka ọ dị mkpa’ iji gbochie akpụkpọ ya ihicha. Hichaa uwe ya na akwa mmiri mmiri iji wepụ unyi ma ọ bụrụ na ọ na-egwuri egwu n'èzí.
Ọ bụrụ na Black Mouth Cur gị bụ nkịta ụlọ, ewepụtụ ntu ya mgbe nile ka o wee nwee ike ịghagharị na nkasi obi.
Ezé ha kwesịkwara ịbụ ihe mbụ gị, karịsịa ma ọ bụrụ na BMC gị na-achụ nta mgbe niile ma jiri ọnụ ya na-ejide anụ oriri. Kwesịrị nlekọta eze A ghaghị ịhụ, gụnyere ịmịcha ezé kwa ụbọchị. Ogwu ezé nwekwara ike inye aka mee ka ezé nkịta gị dị ọcha.
N'ozuzu, Black Mouth Curs bụ ìgwè siri ike, na-adịkarị ndụ Afọ iri na isii
Ndị na-azụ azụ na-elekwasị anya na ịme BMC dị ka ahụike dịka o kwere mee ka ha wee nwee ike mezuo nzube ha dị ka nkịta na-arụ ọrụ. Nke ahụ apụtaghị na Black Mouth Cur anaghị ata ahụhụ site na oke oke ọnọdụ ahụike.
Canines ndị a nwere ike ịdị mfe nsogbu ọkpụkpụ n'ihi ọdịdị ha na-arụ ọrụ, tinyere na-efe efe na ntị ha na anya ha.
Nkọcha ndị a na-achọkarị ọsụsọ n'ọtụtụ n'ime ime ntị ha n'oge mgbatị ahụ. Mkpụrụ mmiri na-eme ka ntị nkịta dị mfe àjà na akọrọ .
Jide n'aka na ịlele ntị Black Mouth Cur gị ma ọ dịkarịa ala otu ugboro n'izu iji hụ na ha dị ọcha ma ha enweghị isi ọjọọ.
Chọrọ ilebanye anya na njirimara ejiri kpochapụ Black Mouth Cur? Lee anya karịa ihe nkiri 1957 Disney Old Yeller , nke atụmatụ a maa mma nkita na smart nkịta , na-emeri obi nke ndị nwe ya.
N'ime ihe nkiri a (nke sitere na akwụkwọ Fred Gipson), Yeller gosipụtara uru ya site na ịchekwa ezinụlọ ya n'ọtụtụ ọnọdụ dị egwu dịka mwakpo sitere na bea, anụ ọhịa ọhịa, na ọbụnadị anụ ọhịa wolf - ihe bụ ezigbo ndụ Black Ọnụ Mo na-eme!
Nke a bụ mkpirikpi ihe nkiri ahụ (kwuo na 1: 21 maka obere peep nke Old Yeller mara mma):
Ọnụ ego nwa nkịta Black Mouth Cur nwere ike ịbụ $ 300 ka $ 500 onye obula. Ọ bụrụ na ọnụahịa ahụ dị ntakịrị nke ukwuu maka gị, enwere nhọrọ mgbe niile ịnabata.
Ọ bụrụ n’echiche na inwere ihe ị ga-eji lekọta Black Mouth Cur, ị nwere ike lelee ma kpọtụrụ ndị na-azụ ụdị:
Ugwu Sandge Ridge (Alabama)
Hillis Black Ọnụ ọnụ (Texas)
Onyinye Blackmouth Curs (Georgia)
Ọnụ Ọgụgụ Black Black (Kentucky)
Ọ dịghị ihe na-atọ ụtọ nke nkịta hụrụ n'anya karịa iwebata nwa nkịta ọhụrụ! Mana tupu ịmalite ịbụ nne na nna na-azụ anụ na ụdị a, gbaa mbọ hụ na ị tụlere mmefu niile.
Ewezuga mkpa Black Mouth Cur, ọ dị mkpa ịhazi atụmatụ maka ọzụzụ nke nkịta a. Nwere ike ịmalite ịkụziri nwa nkịta gị ọzụzụ n'onwe gị, mana, mgbe ụfọdụ, enyemaka ọkachamara kasị mma.
Iji maa atụ, ọ bụrụ n’ịchọrọ ime ka nwa nkịta gị ghọọ enyi ịchụ nta mgbe ọ mere okenye, enwere ọtụtụ ndị na - azụ gị ị nwere ike ịkpọtụrụ maka enyemaka.
Ọ bụrụ n’ịchọrọ ilekwasị anya n ’ịzụlite nrubeisi na pup gị, klaasị nkuzi nrube isi dịkwa.
Ọ bụ ihe obi ụtọ zuru oke ịnweta Black Mouth Cur. Ọ nwere ike ịdị ka ha karịrị akarị, mana, n'ezie, dị ka ọtụtụ nkịta, naanị ihe ha chọrọ bụ ime ụmụ mmadụ obi ụtọ.
Ha mara ihe, sie ike, ma magburu onwe ha na nkịta ezinụlọ. O doro anya na ha ga-achọ ka ị bụrụ onye nwe ụlọ ọrụ nwere ike inye ha ihe zuru oke mkpali nke uche, mmega ahu, na ozuzu .
Ọ bụrụ na ị bụ onye nwe nganga nke Black Mouth Cur, kedụ ọ theụ na mgbu nke ịzụlite ya? Ọ ga-amasị anyị ịgụ gbasara akụkọ gị. Kọọrọ gị ahụmahụ gị na ihe ndị dị n'okpuru ebe a!
Ndi White Labradors di ocha na ndi ozo ikwesiri ima
Goberian Dog: The Ultimate Golden Retriever Husky Mix Nzuzo Nduzi
lab ókè collie mix zuru toro
ọkara German onye ọzụzụ atụrụ ọkara labrador
nwa nkita chihuahua nwere ogologo ntutu isi ojii
nkịta na-aga n'ihu na-atụ egwu ihe ọ bụla
German ọzụzụ atụrụ oji na uhie